PressReader - Ilanga: 2018-11-08 - Kuqokwa abazomela iKZN kwiSA Championship
Kuqokwa abazomela iKZN kwiSA Championship
Bazoqokwa kweyeSave Orion KZNA
Ilanga - 2018-11-08 - Ezemidlalo - MZWAMANDLA ZONDI
BAZOQOKWA kwiSave Orion Half Marathon ezokuba ngeSonto abasubathi abazomela iKwaZulu-Natal kwiSouth African National 21km Championships ezokuba ngoNtulikazi (July) eBhayi.
IKwaZulu-Natal Athletics (KZNA) ithe icela bonke abasubathi abazimisele ukuba yingxenye yeqembu lesifundazwe ukuba babambe iqhaza kwiSave Orion KZNA Championships ezokuba ngeSonto eMgungundlovu ihambisana ne-10km kusuka ngo-6 ekuseni.
Phakathi kwabasubathi abalindelekile kukhona uSipho Mbanjwa weBoxer, uSlindile Gubese, uNkosinathi Sibiya ukukha nje phezulu kwabesilisa. Kwabesifazane kubhekwe uNwabisa Mjoli, uSlindile Chili, uZama Mokoena okulindeleke ukuba bakhiphane inkani kulo mjaho.
Abafuna ukuba yingxenye bangaxhumana no-Ajith Deena kwethi: 0836592732.
* AbaseThekwini namaphethelo bazogadulisana kwiDHS Old Boys 10km nayo engeSonto. Abafuna ukuba yingxenye yalo mjaho ban- gaxhumana noJasson Urbach: 0837763820.
* UProdigal Khumalo waseZimbabwe onegolide kwiComrades Marathon kanti nonyaka ungene unombolo 11 uhlele iTraining Run yokusiza abasubathi ezokuba ngeSonto eNanda Dam. Lo mjaho uzokube uyibanga lika-40km no50km uhlelelwe ukusiza abasubathi emijahweni yangonyaka ozayo.
UKhumalo utshele ILANGA ukuthi inhloso yalo mjaho ukwakha imali yokufukula isikhungo sakhe sezemidlalo. Uthi abasubathi abazobamba iqhaza bazojoyina ngoR150 ukuze bakwazi ukuthola iziphuzo endleleni.
“Abasafuna ukubhalisa bangafika ngoMgqibelo eStella lapho sizokube samukela khona imingenelo. Abahamba ngezimoto siyacela ukuba bafike ekuseni ngeSonto bese sisuka siya eMsinsi, eNanda Dam lapho kuqala khona umjaho,” kusho uKhumalo osubathela iMaxed Elite.
Abafuna ukuba yingxenye yale Training Run bangaxhumana noMartin Ngwenya kwethi: 076 094 1584, uMakhosi Mhlongo kwethi: 073 065 7753 noma uKhumalo kwethi: 060 496 6781.
ABADLALI beProteas behlangene bejabulela iwikhethi lika-Aaron Finch we-Australia obonakala ephuma ebhocobele emdlalweni wokuqala we-ODI ngempelasonto edlule e-Australia.